ဒီကစားသမားတွေဟာ ပရိသတ်တွေ စိတ်ကျေနပ်မယ့်ခြေစွမ်း ပြသဖို့လိုနေပါပြီ
ကြေးကြီးပေးခဲ့ရပေမယ့် မျှော်လင့်သလောက် ခြေစွမ်းမပြနိုင်သေးတဲ့ ကစားသမားများ
10 Oct 2018 . 11:36 AM
ဘောလုံးလောကမှာ ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ဆိုတာက Gambling ဆန်ပါတယ်။ တခြားအသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြကစားနေလို့ ကြေးကြီးပေးခေါ်ခဲ့ပြီး ကိုယ့်အသင်းရောက်မှ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်တာမျိုး ဖြစ်ရပ်တွေက ခဏခဏပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ကာလတုန်းက ဥရောပထိပ်သီးအသင်းတွေဟာ အသင်းအတွက် အကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ ကစာသမားတွေကို မြင့်မားတဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးတွေနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်အထိ ပရိသတ်တွေ စိတ်ကျေနပ်လောက်တဲ့ ခြေစွမ်းမျိုး မပြသနိုင်သေးသူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် ယူရို(၃၁)သန်းနဲ့ အဲဗာတန်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာနဲ့သာ ရုန်းကန်နေရတဲ့ ကိုလံဘီယာနောက်ခံလူ ယဲလ်မီနာ Yerry Mina ၊ ဘာစီလိုနာကနေ အငှားနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး ခြေစွမ်း မပြနိုင်သေးတဲ့ အန်ဒရေဂိုးမက်စ် Andre Gomes တို့လို ကစားသမားတွေပါ။ သူတို့လိုပဲ ကြေးကြီးပေး ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် ခြေစွမ်းမပြနိုင်သေးတဲ့ ကစားသမားတွေ ရှိနေပြီး သူတို့တွေကတော့ . . .
၁ . ဗင်နီစီယက်စ်ဂျူနီယာ Vinicius Junior (ရီးယဲလ်)
ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ဘရာဇီးလ် ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်ကြယ်ပွင့် ဗင်နီစီယက်စ်ဂျူနီယာကို ယူရို(၄၆)သန်းအထိ ပေးပြီး ခေါ်ယူခဲ့တယ်။ ဒါဟာ အသက်(၁၉)နှစ်အောက် ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့မှာ စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပမာဏဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဗင်နီစီယက်စ်ဂျူနီယာကတော့ အခုအထိ ဒီတန်ဖိုးနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ခြေစွမ်းမျိုး မပြသနိုင်သေးဘဲ အသင်းအတွက် (၁၇)မိနစ်သာ ကစားရပါသေးတယ်။
၂ . မဲလ်ကွန် Malcom (ဘာစီလိုနာ)
ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ရိုးမားအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ သဘောတူညီမှုရထားတဲ့ မဲလ်ကွန်ကို ယူရို(၄၁)သန်းနဲ့ ကြားဖြတ် ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်အထိ မဲလ်ကွန်ဟာ အသင်းအတွက် (၂၄)မိနစ်သာ ကစားခဲ့ရတယ်။
၃. ဖာဘင်ဟို Fabinho (လီဗာပူးလ်)
ဖာဘင်ဟိုရဲ့ အနေအထားက နည်းနည်းတော့ အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းနေတယ်။ ပထမတော့ ဒဏ်ရာကြောင့် ယာဂန်ကလော့ပ် Jurgen Klopp က သူ့ကို အသုံးမပြုပေမယ့် နောက်ပိုင်း ဒဏ်ရာပြန်ကောင်းလာတော့လည်း Line Up Out ထားပြန်တယ်။ PSG အသင်းကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် လူစားဝင်ကစားခဲ့ရပေမယ့် နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ ပွဲထွက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။
၄. မာရီယာနို Mariano (ရီးယဲလ်)
လိုင်ယွန်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ အသင်းလူငယ်ကစားသမားဟောင်း မာရီယာနိုကို ရီးယဲလ်အသင်းက မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ ပြန်ခေါ်ခဲ့ပြီး ဂန္ထ၀င်ကျောနံပါတ်(၇)ကိုလည်း ၀တ်ဆင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ယာရီယာနိုဟာ အခုအထိ မျှော်လင့်သလောက် ခြေစွမ်းမပြနိုင်သေးတာကြောင့် သူ့အတွက် သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ယူရို(၂၃)သန်းတန်ဖိုးနဲ့ တူညီတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ပြသဖို့လိုနေပါပြီ။
၅ . ဖေဘီယန်ရုဇ် Fabián Ruiz (နာပိုလီ)
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဘက်တစ်အသင်းနဲ့အတူ တောက်ပခဲ့တဲ့ စပိန်လူငယ်ကွင်းလယ်လူ ဖေဘီယန်ရုဇ်ကို နာပိုလီအသင်းဟာ ဒီရာသီအစမှာ ယူရိုသန်း(၃၀)အထိ ပေးပြီး ခေါ်ယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖေဘီယန်ရုဇ်ဟာ အခုအထိ ပြိုင်ပွဲစုံ (၁)ပွဲသာ ကစားခဲ့ရသေးသလို အီတလီမြေမှာ အံဝင်ဖို့ ရုန်းကန်နေရပါပြီ။
အသင်းသစ်တစ်သင်းမှာ ကစားသမားတစ်ဦး ခြေစွမ်းပြဖို့ အချိန်ကာလတစ်ခုတော့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြထားတဲ့ ကစားသမားတွေဟာ အရည်အသွေးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု ရောက်ရင်တော့ ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြသနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ . . .
Photo:Marca,The Transfer Tavern,Vaaju.
ကွေးကွီးပေးခဲ့ရပမေယျ့ မြှျောလငျ့သလောကျ ခွစှေမျးမပွနိုငျသေးတဲ့ ကစားသမားမြား
ဘောလုံးလောကမှာ ကစားသမားအပွောငျးအရှဆေို့တာက Gambling ဆနျပါတယျ။ တခွားအသငျးမှာ ခွစှေမျးပွကစားနလေို့ ကွေးကွီးပေးချေါခဲ့ပွီး ကိုယျ့အသငျးရောကျမှ မှနျးခကျြနဲ့ နှမျးထှကျ မကိုကျတာမြိုး ဖွဈရပျတှကေ ခဏခဏပါပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှရောသီ အပွောငျးအရှကေ့ာလတုနျးက ဥရောပထိပျသီးအသငျးတှဟော အသငျးအတှကျ အကြိုးရှိမယျထငျလို့ ကစာသမားတှကေို မွငျ့မားတဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေးတှနေဲ့ ချေါယူခဲ့ပမေယျ့ အခုအခြိနျအထိ ပရိသတျတှေ စိတျကနြေပျလောကျတဲ့ ခွစှေမျးမြိုး မပွသနိုငျသေးသူတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ဥပမာပွောရရငျ ယူရို(၃၁)သနျးနဲ့ အဲဗာတနျကို ပွောငျးရှခေဲ့ပွီး ဒဏျရာနဲ့သာ ရုနျးကနျနရေတဲ့ ကိုလံဘီယာနောကျခံလူ ယဲလျမီနာ Yerry Mina ၊ ဘာစီလိုနာကနေ အငှားနဲ့ ပွောငျးရှပွေီ့း ခွစှေမျး မပွနိုငျသေးတဲ့ အနျဒရဂေိုးမကျဈ Andre Gomes တို့လို ကစားသမားတှပေါ။ သူတို့လိုပဲ ကွေးကွီးပေး ချေါယူခဲ့ပမေယျ့ ခွစှေမျးမပွနိုငျသေးတဲ့ ကစားသမားတှေ ရှိနပွေီး သူတို့တှကေတော့ . . .
၁ . ဗငျနီစီယကျဈဂြူနီယာ Vinicius Junior (ရီးယဲလျ)
ရီးယဲလျအသငျးဟာ ဘရာဇီးလျ ဆယျကြျောသကျ လူငယျကွယျပှငျ့ ဗငျနီစီယကျဈဂြူနီယာကို ယူရို(၄၆)သနျးအထိ ပေးပွီး ချေါယူခဲ့တယျ။ ဒါဟာ အသကျ(၁၉)နှဈအောကျ ကစားသမားအပွောငျးအရှမှေ့ာ စံခြိနျတငျ ပွောငျးရှကွေ့ေး ပမာဏဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ဗငျနီစီယကျဈဂြူနီယာကတော့ အခုအထိ ဒီတနျဖိုးနဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ ခွစှေမျးမြိုး မပွသနိုငျသေးဘဲ အသငျးအတှကျ (၁၇)မိနဈသာ ကစားရပါသေးတယျ။
၂ . မဲလျကှနျ Malcom (ဘာစီလိုနာ)
ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ ရိုးမားအသငျးကို ပွောငျးရှဖေို့ သဘောတူညီမှုရထားတဲ့ မဲလျကှနျကို ယူရို(၄၁)သနျးနဲ့ ကွားဖွတျ ချေါယူခဲ့တာပါ။ ဒါပမေဲ့ အခုအခြိနျအထိ မဲလျကှနျဟာ အသငျးအတှကျ (၂၄)မိနဈသာ ကစားခဲ့ရတယျ။
၃. ဖာဘငျဟို Fabinho (လီဗာပူးလျ)
ဖာဘငျဟိုရဲ့ အနအေထားက နညျးနညျးတော့ အံ့အားသငျ့ဖို့ကောငျးနတေယျ။ ပထမတော့ ဒဏျရာကွောငျ့ ယာဂနျကလော့ပျ Jurgen Klopp က သူ့ကို အသုံးမပွုပမေယျ့ နောကျပိုငျး ဒဏျရာပွနျကောငျးလာတော့လညျး Line Up Out ထားပွနျတယျ။ PSG အသငျးကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ လူစားဝငျကစားခဲ့ရပမေယျ့ နောကျပိုငျးပှဲတှမှော ပှဲထှကျခှငျ့မရခဲ့ပါဘူး။
၄. မာရီယာနို Mariano (ရီးယဲလျ)
လိုငျယှနျအသငျးမှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ အသငျးလူငယျကစားသမားဟောငျး မာရီယာနိုကို ရီးယဲလျအသငျးက မြှျောလငျ့တကွီးနဲ့ ပွနျချေါခဲ့ပွီး ဂန်ထဝငျကြောနံပါတျ(၇)ကိုလညျး ဝတျဆငျခှငျ့ပေးခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ယာရီယာနိုဟာ အခုအထိ မြှျောလငျ့သလောကျ ခွစှေမျးမပွနိုငျသေးတာကွောငျ့ သူ့အတှကျ သုံးစှဲခဲ့တဲ့ ယူရို(၂၃)သနျးတနျဖိုးနဲ့ တူညီတဲ့ စှမျးဆောငျရညျမြိုး ပွသဖို့လိုနပေါပွီ။
၅ . ဖဘေီယနျရုဇျ Fabián Ruiz (နာပိုလီ)
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဘကျတဈအသငျးနဲ့အတူ တောကျပခဲ့တဲ့ စပိနျလူငယျကှငျးလယျလူ ဖဘေီယနျရုဇျကို နာပိုလီအသငျးဟာ ဒီရာသီအစမှာ ယူရိုသနျး(၃၀)အထိ ပေးပွီး ချေါယူခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဖဘေီယနျရုဇျဟာ အခုအထိ ပွိုငျပှဲစုံ (၁)ပှဲသာ ကစားခဲ့ရသေးသလို အီတလီမွမှော အံဝငျဖို့ ရုနျးကနျနရေပါပွီ။
အသငျးသဈတဈသငျးမှာ ကစားသမားတဈဦး ခွစှေမျးပွဖို့ အခြိနျကာလတဈခုတော့ လိုအပျပါတယျ။ အခုဖျောပွထားတဲ့ ကစားသမားတှဟော အရညျအသှေးရှိတဲ့သူတှဖွေဈတာကွောငျ့ အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခု ရောကျရငျတော့ ပုံမှနျခွစှေမျးပွသနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ . . .